Hoowlo iyo dheef loogu tala galay waayeelada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In waayeel lagu noqdo dalka Iswiidan / Hoowlo iyo dheef loogu tala galay waayeelada
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 10 10 2018
Waxaa jiro hoowlo iyo dheef badan loogu tala galay waayeelada.
Sawir: Matilda Karlsson, Magaalada Göteborgs
Waxaa jiro ururo badan oo qorsheeyo hoowlo loogu tala galay dadka hoowlgabka ah. Urur ka mid ah ururyadaas, waa ururka howlgabka qarameed, PRO.
Waxaa xiliyada qarkood, waayeelka gaadiidka-dadweeynaha ee degmooyinka qaarkood, ku raacaan lacag la'aan ama ayadoo kharashka laga dhimo.
Haddii aad da' weeyntahay hadana howl-qabadka jirkaada keenaayo in raacida gaadiidka dadweeynaha kuugu adag yahay, waxaad isticmaali karta adeega raacida (färdtjänst). Waxaa markaas kharash yar kuu raaceeysaa taksi badalka bas iyo tareen. Si aad uu hesho adeega raacida waa in aad ka codsataa degmada aad ka diiwan gashantahay. Sido kalena waa in aad codsiga ku soo dartaa waraaqada cadeeynta adeega raacida u soo qoray dhakhtar ka waramaayo in aadan raaci karin gaadiidka-dadweeynaha.
Safarada degmada gudaheed ah waxaa inta badanaa raaci kartaa waxa loo yaqaan flexlinjer. Waa basas yar oo dhulkoodu ku aadan yahay dhulka-jidka, si dadka ku socdo kursiga loogu sahlo soo fuulida baska. Baskaan waxuu ku soo dhaweeynaa gurigaada halka uu baska dadweeynaha kuu soo dhaweeyneeyn. Baska waxuu ku geeynaa lee meelaha uu qofka balansada in uu ka soo koro ama ku daga, sidaas darteed ayee xiliyada baska uu socdo ku kala duwnaan karaan.